देउबालाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर - Kantipath.com
देउबालाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर
नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुँदा र नहुँदा आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिका लागि पनि सहकार्य गर्न काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रस्ताव गरेका छन् । प्रचण्ड–माधवले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त संघर्ष गर्ने र पुनः स्थापित भएको अवस्थामा देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेसम्मको अफर गरेका छन् ।
बुधबार साँझ ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म राजधानीमा देउवासँग भएको गोप्य भेटमा प्रचण्ड–माधवले संयुक्त संर्घषदेखि सत्ता सहकार्यसम्मको प्रस्ताव गरेका हुन् । देउवाले प्रचण्ड–माधवको प्रस्ताव पार्टीको बैठकमा राख्ने र त्यहाँबाट आएको निचोडपछि फेरि छलफल गर्ने बताएका छन् ।
प्रचण्डले ‘तपाईंले किन यति धेरै चुनावमा जोड दिइरहनुभएको छ ?’ भनेर सोधेका थिए । जवाफमा देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरेको भए पनि चुनावमा जानु लोकतान्त्रिक विधि भएको बताए । त्यसपछि प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भनेर सडकमा जाँदा र सडकबाटै चुनावको वकालत गर्दा लोकतन्त्र नै धरापमा परेको भनाइ राखेका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
Previous Previous post: माघीपर्वका अवसरमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टद्वारा शुभकामना
Next Next post: बैङ्कले दिने ब्याजदर फेरि घट्यो, कुन बैङ्कमा कति ?
बिजुलीको महसुल घटाउनुपर्ने : मन्त्री भुसाल
अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस : चुनौतीका बीच सफलता
चितुवाको आक्रमणबाट क्षति भएकालाई राहत
लिभिङ टुगेदर जोडीको भर ७२ घन्टे चक्की(आई–पिल) मा
लकडाउनका कारण ३० जना सुत्केरीको मृत्यु
नेपाल ट्रष्टको १७३ रोपनी बाबुराम भट्टराईको पालामा शंकास्पद मोहीका नाममा
एक शिक्षकको हत्या
बैशाख २० बाट आन्तरिक तथा २२ गते रातीबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा बन्द
जनताको समृद्धिको चाहना काँग्रेसले मात्र पूरा गर्न सक्छ
३० करोड लगानीमा चिया उद्योग
पुलिसको घरमा भेटियो सुनको ट्वाइलेट !
एनआरएनए कोरियाको आठौँ अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा दीपक पुनः निर्वाचित
पूर्वमाओवादी नेताहरुको मुद्दा दीपककुमार कार्कीको इजलासमा